RASMI: Carlos Bacca iyo Giacomo Bonaventura oo seegaya kulanka Roma – Gool FM
RASMI: Carlos Bacca iyo Giacomo Bonaventura oo seegaya kulanka Roma
Raage December 11, 2016
(Milano) 11 Dis 2016 – Vincenzo Montella ayaa xaqjiijiyay in labada laacib ee Carlos Bacca iyo Giacomo Bonaventura ay seegayaan kulanka ay habeen dambe u safrayaan caasimadda Roma.
Kooxda Rossoneri ayaa kaalinta 2-aad kula jirta Roma tartanka Serie A waxayna labadoodu isku dhacayaan iyagoo 4 dhibcood ka dambeeya hoggaamiyayaasha Juventus.
Yeelkeede, waxay kulankan ciyaarayaan iyagoo tebaya qannaaska Bacca oo aan laba kulan dheelin iyo Bonaventura oo hal kulan maqnaa, iyadoo uu Montella sheegay inuusan doonaynin inuu ku qamaaro labadan laacib oo kasoo kabanaya jugo ay qabaan.
“Waan ka xumahay waxaa maqan Jack iyo Bacca, waxaannu isla go’aansannay inaynaan halis gelin. Way fiican yihiin, balse way uga daraysaa in kooxda lagu daro.” ayuu yiri Montella oo uu kulankan sidoo kale ka maqnaa Kucka oo ganaax ku seegaya.
GOOGOOSKA: Manchester United vs Tottenham Hotspur 1-0 (Mkhiteryan oo Man U u badbaadiyay balse bareelle ku baxay)